Axkaamta Ramadaanta, Qore: Sh. Cabdirisaaq Cabdiraxmaan Xasan Rakuub. Qaybtii 3aad
Axkaamta Ramadaanta, Qore: Sh. Cabdirisaaq Cabdiraxmaan Xasan Rakuub. Qaybtii 3aad
§ In aad soonto maalinta shakiga (sida in la arki waayo bisha, Shacbaanna aan la dhammaysan
§ In aad soonto sannadka oo dhan.
§ In aad badiso xuska Alle SWT sida; Quraan akhris badan, digri badan iyo duco badanba
§ In aad wakhtiga ilaaliso (waa in aanu wakhtigu kugu dhaafin in aad lumiso, sida adiga oo ciyaaraya ‘game, dubnad, laadhuu iyo shax’. Ogow in culimada qaar dubnadda laadhuda iyo shaxda sidooda u xaarantimeeyaan, markaa in wax laysku haysto aannu soonkaagii kugu dhaafin waa dardaraan)
§ In aad badiso salaadaha sunnayaasha ah, waxa dhacda in dadka
qaar salaadda tahajudka u kacaan, salaadda subaxna ka seexdaan, taasi maaha mid bannaan.
§ In aad sadaqada badiso, sida adiga oo afurinaya qof sooman ama wax siinaya qof baahan.
§ Qofka gaboobay (qofka gaboobay waxa ku waajib ah in maalin wal ba u miskiin quudiyo, waxaana laga bixinayaa mud (laba kilo iyo badh) raashin ah ama qof sooman ayuu afurinayaa. Hadduu doonana hal maalin ah ayuu soddon miskiin wada afurrinaya)
§ Qofka xanuusanayaa (qofka xanuusanaya haddii la rajaynayo in uu ka kaco wuu soo qallaynayaa, haddii aan rajo laga qabin in uu ka bogsan karo xanuunka isna sida qofka gabowga ayaa laga afurrinaya)
§ Qofka socotada ah (musaafirku isagu wuu iska afurayaa hadhowna wuu soo qalaynayaa).